China C-ekara ntụ ntụ ntekwasa welded ntupu ngere N'ihi Power Plants Manufacturer and Supplier | Oghere
Usoro mmeputa nke C welded waya ntupu nsu yiri nke ọzọ welded nsu. Ọ bụ a ngere nsu iji galvanized waya welded ọnụ firstly na mgbe ahụ mkpa ekwe igwe na-eme ka C ekara na elu. Ọ bụ a elu ike na inogide waya ntupu nsu na-eji predominantly dị ka elu nche mgbochi.
PRO.FENCE na-enye C-ekara welded waya ntupu ngere e wuru nke galvanize waya ntupu panel ma wuchaa na ntụ ntụ zuru ezu. Nke ahụ ga - eme ka mgbochi na - agbatị ma gbasaa oge ojiji. Anyị na-enye akwa nha akwa kama nke nnukwu iji chekwaa ọnụ ahịa maka ndị ahịa ma na-akụ ọkụ iji hụ na ojiji a na-agbanwe agbanwe. Ọ bụkwa nhọrọ a ma ama nke ọtụtụ ndị ahịa na Japan ma jiri ọtụtụ n'ime usoro mgbatị nke osisi anyanwụ, ụlọ obibi, obodo, ogige ntụrụndụ, okporo ụzọ wdg.
Nwere ike ịchọta ya ngwa ngwa gburugburu ụlọ obibi, obodo, ogige ntụrụndụ na Japan ma na-ejikwa ya na-agba ogige nke osisi anyanwụ.
Emechara: Powder ntekwasa (Brown, Black, White)
1) Dị iche iche
Nke a welded waya ntupu ngere na-mere si ígwè waya na nwere ike ahaziri ke dịgasị elu, dị iche iche gauges izute mkpa na saịtị na mmefu ego nke oru ngo.
2) Mgbochi imebi emebi
The elu nke ngere okokụre ke electrostatic ntụ ntụ ntekwasa na PRO.FENCE iji ama ika Akson na ntụ ntụ mkpuchi ga-ruo 150μm dịkarịa ala. Na mgbakwunye, ngwa mgbakwunye niile dabara adaba bụ SUS304. Ndị ahụ na-arụ ọrụ pụrụ iche na mgbochi corrosion. PRO.FENCE ekweghị nkwa nchara ọ dịkarịa ala maka afọ 6.
4) Anwụ ngwa ngwa
Ọkara okirikiri ekwe dị n'elu na ala nke ntupu panel maka iguzogide ujo mpụga na-emekwa ka ngere anya mara mma.
Nke gara aga: China N'ogbe Waya Container Factory - A ụba Metal Security lọjistik waya ntupu Roll onu - Pro
Osote: L-welded welded waya ntupu ngere maka ụkpụrụ ụlọ ụlọ